Aha! Jokes, Satire » ပဲနံ Reloaded	36
အလင်းဆက် says: ဗိုလ်ချုပ်က တီလုပ်စာတွေ မကြိုက်ဖူး
အချစ်​ကံ​ခေ​ပေမယ့်​ အနှစ်​ကျန်​​စေချင်​တဲ့ ဂီ says: မားကတ္တင်းပိုစ့်​​တွေ မ​ရေး​တော့ဝူးလားဆိုတဲ့ ပိတ်​သတ်​ယီး အတွက်​ပါ​အေ
Mike says: .ခိခိ..ကျုပ်မှာအထောက်အထားရှိသဗျ…ဗိုလ်ချုပ်က တီလုပ်​စာ စားပါသဗျ ….ဆိုတော့ကာမယ်..၀က်အူချောင်း စတုဒီသာပွဲ​တွေကိုလည်း မ​မေ့စ​ကောင်းဘူးဗျ တို့ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ထမင်းဝိုင်းလေး
အချစ်​ကံ​ခေ​ပေမယ့်​ အနှစ်​ကျန်​​စေချင်​တဲ့ ဂီ says: အဲ့​နေ့ကျရင်​ ထမင်းတနပ်​ ၀က်​အူ​ချောင်း ၂​ချောင်းတည်းနဲ့ ထမင်းစားပြီး ဂုဏ်​ပြုမို့လားဟင်​င်​
Mike says: .ဟုတ်တယ် မစ္စတာဂီ
.ဒေါ်စုကိုလည်း မလောက်တဲ့ကြားက ဖအေ့ဝက်အူချောင်းတောင်းစားလို့..ဆန့်ကျင်ဂျ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: ဒေါ်စုကို ဆန့်ကျင်ဖို့ ချက်ကောင်းတွေ့ပြီ Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: မောင်ဂီရေ
kai says: စိန့်ပြည်.. ဟိုင်နန်ကျွန်းကို.. စိန့်တိုင်းသားဟန်ဆောင်သွားတာ.. ဟိုမှာယောင်ချာချာနဲ့တော်တော်ကြာသောင်တင်နေတယ်လို့.. ဆိုတာမို့.. အဲဒီအစာတွေစားမှာဖြစ်သလို.. ဂျပန်မှာလည်း.. ကြာသမို့.. လမန်င်လဲ..ဆွဲမှာပါပဲ..
အထိမ်းအမှတ်နေရာတွေ.. ထိန်းသိမ်းကြ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
အချစ်​ကံ​ခေ​ပေမယ့်​ အနှစ်​ကျန်​​စေချင်​တဲ့ ဂီ says: အဲ့သည့်​​နေရာက သံပန်းမှာ ချိတ်​ဆွဲဖို့ ​
မွသဲ ( 17082011 ) says: တိဘူးအေ ညီးပေါက်ရဒေ ၁၃ ကျပ်ပဲယူဒေါ့မယ် ညီးနဲ့ဖက်ပြောချင်ဘု
မြစပဲရိုး says: ဆလု ၁ ခါ – အကြော်
အချစ်​ကံ​ခေ​ပေမယ့်​ အနှစ်​ကျန်​​စေချင်​တဲ့ ဂီ says: အဲ့တံတားမှာ ဘာဇာတ်​လမ်းရှိခဲို့ အမှတ်​တရခတ်​တာလဲမသိ
kai says: Cologne’s Love Locks Bridge | Atlas Obscura – ဒါကအရီးလတ်ပြောတာထင်တယ်..။
ဦးကျောက်ခဲ says: ရှိတယ်လေ… သဂျီးရဲ့
အချစ်​ကံ​ခေ​ပေမယ့်​ အနှစ်​ကျန်​​စေချင်​တဲ့ ဂီ says: သံကွန်​ခြာ ခုနစ်​ထပ်​အုပ်​တာ​တော့ မှတ်​ဖူးပါရဲ့
kai says: အမ်… သူ့ဇတ်လမ်းက.. သော့ခတ်ရင်းတန်းလန်း.. အလစ်မှာဝင်ဥခံရတာကြီး…
မြစပဲရိုး says: အာ ဟ၊ အာဟ
Mr. MarGa says: ချဉ်ထှာဗျာ
ဦးကျောက်ခဲ says: ဗိုလ်ချုပ်က အညာသား …. ပဲကြိုက်တာ မထူးဆန်းပါဘူး…
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: နာလည်းအဲ့ကိစ္စကို တွေးမိတယ် မပြောအားတာ။
ခင်ဇော် says: နင် ရိုက်နေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ် ရုပ်ရှင်တော့ ရပ်လိုက်သင့်ပြီ။
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: တိုင်းရင်းပေါင်းစုံနိုင်ငံတကာဗိုလ်ချုပ်
ယိုရှီဒါ ရှာထုတ်​ခံ says: ရွာသူား​တွေမြင်​ဖူး​အောင်​ ပ​လော့​လေး​တေ ကူးပြ​ပေးပါလားညင်​င်​
ခင်ဇော် says: နာ ကြောက်တယ်။
ယိုရှီဒါ ရှာထုတ်​ခံ says: ​ကျော်​ က ဖုန်းနဲ့မို့ပါ​အေ
black chaw says: သူ့ဥာဏ် မီသလောက်လေး ဂုဏ်ပြုကြတာပေါ့ကွယ်…။
Wow says: အာ့ပဲ.. အာ့ပဲ
Evidence တို့ use black & white တို့ ဘီလောက်အရေးကျီးသလဲဆိုဒါ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
Wow says: အော့.. ဘာနဲ့အမှတ်တရလုပ်ရမဲဆိုဒဲ့ အဗီးဒန့်ပါထားဂဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: နာ ကျည်ဆံ ၁၃ ချက် မပြောနဲ့
ခင်ဇော် says: —————–ဒီစကား—————–
နောက် ဖေဖေက တစ်ခါတလေ “ငရုတ်သီးဟင်း စားချင်တယ်ပြောတာ” ဘယ်လိုဟင်းမျိူးမှန်း မသိလို့ မကျွေးနိုင်ခဲ့တာကို မေမေက ဝမ်းနည်းစွာပြောဖူးတယ်.. ကျွန်မကလည်း ဒီ “ငရုတ်သီးဟင်း” ရှာပုံတော်လုပ်တာ အသက်အတော်ကြီးမှပဲ တောင်တွင်းကြီးဇာတိ ညီမတစ်ယောက် ချက်ကျွေးလို့ စားဘူးဖြစ်တော့တယ်.. *ရိုးရိုးသားသား နေခဲ့တဲ့ ဖေဖေနဲ့မေမေကို
kai says: သခင်အောင်ဆန်း.. အကြိုက်ဆုံးဟင်းမှာ.. ဆိတ်ကလီစာဟင်းဖြစ်သည်လို့.. မှတ်ထားရတော့မယ်ပေါ့..။
Mr. MarGa says: ဒီမှာ လာကြည့် သဂျီး
ခင်ဇော် says: https://www.facebook.com/193575494140325/photos/a.438783119619560.1073741866.193575494140325/438783186286220/?type=1
kai says: ပုံထည့်လိုက်ကြောင်း..
naywoon ni says: ဒို့က​တော့ အညာသားပါပဲ ပဲ​တော့ ကြိုက်​ပါရဲ့ ။ နံပြား​တော့မကြိုက်​ ။ မုန့်​လုပ်​နည်းကွာလို့နဲ့ တူပါရဲ့ ။ ပီး​တော့ ခုလက်​ဖက်​ရည်​ဆိုင်​​တွေမှာကလည်း နံပြား​ရောင်းတဲ့ ဆိုင်​မ​တွေ့မိသ​လောက်​ ။ အရင်​က တစ်​ဆိုင်​ရှိဖူး​သေးတယ်​ ။ အဲ့ ဆိုင်​က နံပြားက ပြာ​တွေလူး​နေတာချည့်​ပဲ ။ မ​ရောင်းဆို သူ့အတွက်​သီးသန့်​ ဖိုလုပ်​ရ​သေးတယ်​​လေ ။ အဲ့ ဖိုက နံပြားကလွဲပြီး ဘာမုန့်​မှ လုပ်​လို့မရတာလဲ ပါမယ်​နဲ့ တူရဲ့ ။ အဲ့​တော့ လွယ်​လွယ်​ကူကူ ပလာတာ နဲ့ အီကြာ​ကွေး ပဲ​ရောင်းကြတာ​ပေါ့ ။ ပလာတာက တစ်​ခြား​နေရာ​တွေမှာ လိပ်​ခုတ်​တဲ့ ။ ပလာတာ ကိုပဲနဲ့ လိပ်​ပြီး ဒါးနဲ့ စဉ်း အဲ့ ခုတ်​တာကိုး ။ ​ကျော်​တို့ဆီက ဒါးမသုံးဘူး ။ ယဉ်​​ကျေးတယ်​ ။ ကပ်​​ကျေးနဲ့ ညှပ်​တယ်​ ။ ဒါ​ကြောင့်​ လိပ်​ညှပ်​တဲ့ ။ အစား အ​သောက်​​ကြောင်းပဲ ​ပြော​နေ​တော့မလား ။ အလုပ်​အကိုင်​​ကြောင်း​လေး ​ပြောကြပါအုံး ။ ဒါမှ ​ကျော်​တို့ အလုပ်​လက်​မဲ့​လေး​တွေ ဗဟုသုတရ​အောင်​ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.